News Archives | Page4of7| Anycall Mobile
Oneplus 8 Pro ရဲ့ ကနဦး ပုံရိပ်များ…
Oneplus 7T နဲ့ 7T Pro တွေကို မိတ်ဆက်ပြီးတာ တစ်လတောင် မရှိသေးပေမယ့် အခု ကျွန်တော်တို့ နောက်လာမယ့် Oneplus 8 Pro ရဲ့ ကနဦး ပုံရိပ်တွေကို မြင်တွေ့နေရပါပြီ။ Oneplus 8 ရဲ့ ပုံရိပ်တွေ ကိုလည်း မကြာသေးခင်က ရရှိထားပြီးသားပါ။ ကနဦး ပုံရိပ်တွေ အရတော့ Oneplus 8 Pro ဟာ Oneplus ရဲ့ ပထမဆုံး Quad Camera Setup ကင်မရာ၄လုံးနဲ့ ဖုန်း ဖြစ်လာမယ့် အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။ (ကင်မရာ…
The Foldable Phones : The Beginning ခေါက်ကွေးနိုင်သော ဖုန်းများ : စတင်ခြင်း
Nyein Aung Htet,9months ago2min read
2019 ခုနှစ်က‌ Foldable Phone ဆိုတဲ့ ခေါက်ကွေးနိုင်သော ဖုန်းများ ရဲ့ စတင်ခြင်းပါ။ Foldable Phone တော်တော် များများကို မြင်တွေ့ခဲ့ရလို့ Foldable Phone ဟာ 2019 ရဲ့ Smartphone Trend လို့လည်း ဆိုလို့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဖုန်းတွေရဲ့ Display တွေဟာ ကြီးသထက် ကြီးလာနေပြီး တစ်ချို့ ဖုန်းတွေဆိုရင် ဖုန်းလို့ခေါ်ပေမယ့် Tablets အရွယ်အစား နီးပါရှိပါတယ်။ Foldable Phone တွေဟာ ဟိုးအရင်က Flip Phones ဆိုတဲ့ အထက်အောက် လှန်ချိုးလို့ရတဲ့ ဖုန်းတွေရဲ့…
Xiaomi ရဲ့ Mi Note Series တွေ ပြန်လာပါပြီ!
Xiaomi ရဲ့ Upper Mid-ranges ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Mi Note Series တွေဟာလူကြိုက်များတဲ့ ဖုန်းတွေ ဖြစ်ပြီး Mi Note3ဟာ 2017 ခုနှစ်မှာ နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေက Mi Note3ရဲ့ ‌နောက်ဆက်တွဲ မျိုးဆက်သစ် ဖုန်းတွေ မထွက်ရှိခဲ့သလို ဒီနှစ် အစပိုင်းမှာလည်း Mi Note Series နဲ့ Mi Max Series ဖုန်းတွေကို ထပ်မထုတ်တော့ဘူးလို့Xiaomi ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ လေကျွင်း(Lei Jun) က…
တန်ဖိုးသင့် စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ စျေးကွက်ကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ ထိုးဖောက်ပြီး အချိန်တိုအတွင်းမှာ အောင်မြင်နေတဲ့ Realme ဟာ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Flagship ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Realme X2 Pro ကို ဒီ ကနေ့ တရားဝင် မိတ်ဆက်သွားပါပြီ! အရင်ရက်တွေကတည်းက Realme X2 Pro ရဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ချို့ကို ထုတ်ပြနေခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ဒီနေ့ မိတ်ဆက်ပွဲမှာတော့ ထင်မထားတဲ့ အချက်‌လေးတွေ ပါဝင်လာပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Flagship ဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်တဲ့ Realme X2 Pro မှာ Flagship ဖုန်းတွေရဲ့ အင်္ဂါရပ်တို့ အတိုင်း……
ဒီတစ်ခါတော့ ဖုန်းတွေအကြောင်း မပြောဘဲ ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ Display နည်းပညာတွေ အကြောင်း ပြောရအောင် လားဗျာ…။ ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ ဖုန်းအများစုမှာ LCD နဲ့ OLED ဆိုတဲ့ Display နည်းပညာနှစ်ခုကို အသုံးပြုထားကြပါတယ်။ ဒါဆို အဲ့နှစ်ခုက ဘယ်လို ကွာခြားတာလဲ? ဘာတွေ ပိုကောင်းပြီး ဘာတွေမှာ အားနည်းနေတာလဲ? ဘာဖြစ်လို့ ဈေးကြီးတဲ့ Flagship ဖုန်းတွေမှာ OLED ပါဝင်ပြီး စျေးသက်သာတဲ့ Mid-range နဲ့ Budget ဖုန်းတွေမှာ LCD ပါဝင်တာလဲ? သိသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို မျှ‌ဝေပေးမှာမို့ ဒီစာလေးကို ပြီးတဲ့အထိ ဖတ်စေချင်ပါတယ်ဗျ။…
(သင်ဖတ်လိုက်တာ မမှားပါဘူးနော်:P) Pixel ဖုန်းတွေဆိုတာ အများစုနဲ့ သိပ်ပြီး မရင်းနှီးသေးတဲ့ ဖုန်းတွေဖြစ်တာမို့ အရင်ဆုံး သူတို့ အကြောင်းကို နည်းနည်းလေး ရှင်းပြပေးဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ Pixel ဖုန်းတွေဆိုတာ Google မှ အစအဆုံး ဒီဇိုင်းဆွဲ ပြုလုပ်ဖန်တီး ရောင်းချတဲ့ Android ဖုန်းတွေဖြစ်ပြီး ကင်မရာ တစ်လုံးတည်းဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးနိုင်ခြင်း၊ ထိပ်တန်း စွမ်းဆောင်ရည် ရှိခြင်း၊ စျေးနှုန်း သင့်တင့်ခြင်းတို့ကြောင့် နာမည်ကြီး လူကြိုက်များပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဝင်ရောင်းချခြင်း မရှိသေးတာကတော့ စိတ်မကောင်းစရာလို့ ပြောရမှာပါ။ 🙁 ကဲ… Leak ဖြစ်လွန်းတဲ့…
စိတ်ဝင်စားစရာ TikTok အကြောင်း…
TikTok လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့လို လူငယ်တွေနဲ့ အနုပညာရှင်တွေ အကြားမှာ မသိသူ မရှိလောက်တဲ့အတော်လေး ရေးပန်စားတဲ့ Video App တစ်ခုပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း TikTok မဆော့ဘူး ဆိုရင်တောင်မှ ဖန်တီးမှုအရမ်းကောင်းတဲ့၊ စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့၊ ရီစရာကောင်းတဲ့၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့၊… TikTok Video အတိုအထွာလေးတွေကို သေချာပေါက် ကြည့်ဖူးတယ်ဆိုတာကိုတော့ မငြင်းပါနဲ့နော်…။ ခေါင်းစဉ်လေးအတိုင်းပဲ အခု ကျွန်တော်တို့ စိတ်ဝင်စားစရာ TikTok အကြောင်းလေးပြောကြရအောင်…။ Tiktok ဟာ ဘယ်လိုမျိူးလဲဆိုတာကို အားလုံးသိပြီး ဖြစ်မှာမို့ ထွေထွေထူးထူး ပြောဖို့ လိုမယ် မထင်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ နောက်ကွယ်က လူသိပ်မသိတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကိုပဲ ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ TikTok…
Leaks ဖြစ်လာပြန်တဲ့ OnePlus 7T Pro
Oneplus 7T Series တွေကို လာမယ့် အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်နေ့ လန်ုဒန်မှာ မိတ်ဆက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။(Oneplus 7T ကို ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်က အိန္ဒိယမှာ မိတ်ဆက်ခဲ့ပေမယ့် စတင် မရောင်းချရသေးပါဘူး။) အခုလည်း Oneplus 7T Pro ရဲ့ ပုံရိပ် အချို့နဲ့ သူ့ရဲ့ အကြောင်းအရာ အချို့ Leak ဖြစ်လာပြန်ပါပြီ။(အရင်က ~T ပဲ ရှိခဲ့တာပါ အခု ~T Pro ကတော့ အသစ်ပါ။) Oneplus T Series တွေဟာ…
စောစောစီးစီး Leak ဖြစ်လာတဲ့ Oneplus 8 ပုံရိပ်များ
Full Speed Flagship ဆိုတဲ့ Realme X2 Pro
Nyein Aung Htet, 10 months ago 1 min read
5G Network အကြောင်း နှင့် 5G ဖုန်းတွေဈေးချိုလာမှာလား…?
Nyein Aung Htet, 10 months ago3min read
အတိုဆုံး ဖြေရရင် … ဟုတ်ကဲ့ ဈေးချိုလာမှာပါ။ 5G ရဲ့ အရမ်းမြန်တဲ့ Speed Test Videos တွေကို အားလုံးမြင်ဖူး တွေ့ဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ 5G Support ပေးနိုင်တဲ့ ဖုန်းတွေရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကလည်း လန့်စရာ ကောင်းလောက်ပါတယ်။(Galaxy Note 10+ 5G သိန်း ၂၀ ကျော်ရှိ) နည်းပညာဟာ အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှ ပိုမို တိုးတက် ကောင်းမွန်(Develop) ဖြစ်လာသလို ရင့်ကျက်မှု (Mature)လည်း ဖြစ်လာလေပါပဲ။ ပြီးတော့ ဈေးချိုလာလေလေပါ။ အနီးစပ်ဆုံးနဲ့ အမြင်သာဆုံး ဥပမာ ပေးရရင် Under-screen/in-display…
လူမသိ သူမသိတဲ့ Xiaomi Mi9Pro 5G (သို့) ဈေးအချိုဆုံး 5G ဖုန်း
Nyein Aung Htet, 10 months ago2min read
မနေ့က ပြုလုပ်သွားတဲ့ Xiaomi ရဲ့ “EXPLORE A FUTURE WITHOUT LIMITS” ဆိုတဲ့ ပွဲမှာ လူတွေကို အုတ်အုတ်ကြတ်ကြတ်ဖြစ်သွားစေတဲ့ Xiaomi Mi MIX Alpha ဖုန်တစ်လုံးတည်းပဲ မိတ်ဆက်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ Xiaomi ရဲ့ ဒုတိယမြောက် 5G ဖုန်းဖြစ်တဲ့ Mi9Pro 5G ကိုလည်း တစ်ပါတည်း မိတ်ဆက်သွားပါသေးတယ်။ လူစိတ်ဝင်စားမှု အခံရဆုံး Mi MIX Alpha ကြောင့် ဒီ Mi9Pro 5G ကို လူတွေသိပ်…
မြန်မာငွေ ၄၃ သိန်းဝန်းကျင်ရှိမယ့် Xiaomi Mi Mix Alpha အကြောင်း သိသင့်သမျှ
2019 ရဲ့ September လ ကတော့ နည်းပညာကို စိတ်ဝင်စားသူတို့အဖို့ တကယ့်ကို ရင်ခုန်စိတ်အလှုပ်ရှားရဆုံး အချိန်ကာလ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အကြမ်းစား နည်းပညာတွေနဲ့ ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ပြိုင်ဆိုင်မှုထဲကို တရုတ် ဖုန်ထုတ်လုပ်သူ Xiaomi ကလည်း သူ့ရဲ့ Mi Mix Alpha နဲ့ ဝင်ရောက်လာပာပြီ! အောက်မှာ သင် ဖတ်ရမှာတွေကတော့ Xiaomi Mi Mix Alpha အကြောင်း သိသင့်သမျှပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Display ကနေ စပြီး…
တန်တာထက်ကို တန်ဦးမယ့် Redmi K20 Pro Premium Edition
Redmi ရဲ့ အောင်မြင် လူကြိုက်များပြီးသား Redmi K20 Pro ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အဖြစ် ထွက်ရှိလာတဲ့ Redmi K20 Pro Premium Edition ဖုန်းအသစ် နှစ်လုံးကတော့ ထပ်ပြီးတော့ လူကြိုက်များဦးမယ့် အနေအထားမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဈေးအကျကို စောင့်ပြီးတော့ Redmi K20 Pro ကို ဝယ်ချင်နေသူတွေ အတွက်တော့ ရွေးချယ်စရာ တစ်ခုထပ်တိုးလာဦးမှာပါ။ ဒီ Redmi K20 Pro Premium Edition မှာတော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း Black နဲ့ မိန်းကလေး ဆန်ဆန် White…
မကြာခင် မိတ်ဆက်မယ့် Xiaomi Mi9Pro 5G နဲ့ Mi Mix 5G တို့ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချို့…
Unicode Version Xiaomi က 5G Support ပေးနိုင်မယ့် Mi9Pro 5G နဲ့ Mi Mix 5G ဖုန်းအသစ် နှစ်လုံးကို မကြာခင် မိတ်ဆက်တော့မှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း မိတ်ဆက်ပွဲ မတိုင်ခင် သူတို့ရဲ့ အချက်လက်တစ်ချို့ကို Xiaomi က Fan တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်အောင် Tease လုပ်နေသလို Online မှာလည်း သူတို့ရဲ့ အချက်လက်တစ်ချို့ ပြန်နှံ့ပောက်ကြားလာပါသေးတယ်။ ပထမဆုံး တစ်ခုကတော့ မကြာခင် ထွက်ရှိမယ့် Mi9Pro 5G…